Wararka - Maxay heerkulka culeyska ee bamka biyuhu aad u sarreeyaa, waana maxay sababta?
Deep Groove Ball saarista
6000 taxane ah
6200 taxane ah
6800 taxane ah
6900 taxane ah
16000 taxane ah
Qaadista Ruwaayadda Taper
Qaybaha dhalista iyo Guryaha
Isu-dheellitirka Kubbadda Cagta
Dhalista Wareegtada Wareega
Dhalmada aan lahayn
Xannibaadda Ball Xiriirka xagasha
Dhalista Bamka Biyaha
Hub Qaadista DAC Taxanaha
Haysashada Siidaynta Lidka
Isukeen Ball saarista
Waa maxay sababta heerkulka keena ee bamka biyuhu uu aad u sarreeyaa maxaase u wacan?
1. Laabista ama si khaldan loo dhigayo mashiinka mashiinka biyaha ayaa sababi doona in bamka biyuhu ruxo oo uu sababo kuleyl ama xirashada qalabka.
2. Kordhinta riixitaanka foosha (tusaale ahaan, marka saxanka dheelitirka iyo giraanta dheelitirka ee bamka biyaha si daran u duugoobaan), culeyska foosha ee dusha ayaa lagu kordhiyaa, taas oo keeneysa in culeysku kululaado ama xitaa waxyeelleeyo .
3. Qaddarka saliida saliidda (dufanka) ee ku jira dhalista ayaa ah mid aan ku filnayn ama xad dhaaf ah, tayada ayaa liidata, waxaana jira qashin, biinanka birta ah iyo qashin kale: Samaynta gawaarida mararka qaarkood ma wareegeyso waxyeelada saliidda, iyo salka lama soo saari karo saliida si ay u keento culeysku inuu kululaado.
4. Caddaynta iswaafajinta iswaafaqsan ma buuxiso shuruudaha. Tusaale ahaan, haddii iswaafajinta udhaxeysa giraanta gudaha iyo godka bamka biyaha, giraanta banaanka kore iyo jirka sido aad u dabacsan yahay ama aad u adag, waxay sababi kartaa culeysku inuu kululaado.
5. Isu dheellitirka maaddada rotorka biyaha ma fiicna. Awooda shucaaca ee rotor bamka biyaha ayaa kordha culeyska xambaarana wuu kordhaa, taas oo keenta in culeysku kululaado.
6. gariirka matoorka biyaha marka uu ku shaqeynayo xaalado aan aheyn qaab naqshadeynta ayaa sidoo kale sababi doona in bamka biyaha dhaliya uu kululaado.
7. Dhalista ayaa waxyeello soo gaadhay, taas oo inta badan sababa kululaynta dhalista. Tusaale ahaan, sita rullaluistemadka go'an ayaa weli dhaawacan, kubbadda birta ayaa burburinaysa giraanta gudaha ama giraanta dibedda ayaa jebisa; lakabka daawaha ah ee isbadalka ku dhajinaya ayaa diirmaya oo dhacaya. Xaaladdan oo kale, dhawaqa sita dhawaaqa ayaa ah mid aan caadi ahayn oo sawaxanka ayaa ah mid aad u sarreeya, sidaas darteed dhawaaqa waa in loo kala qaadaa si loo baaro loona beddelo waqtiga.
Ka taxaddaridda bamka biyaha ee aadka u sarreeya heerkulka dhalista ：
1. Fiiro gaar ah u yeelo tayada rakibaadda.
2. Xoojinta dayactirka.
3. Bixinta waa in lagu xushaa iyadoo la raacayo xogta ku habboon.
Waqtiga boostada: Oct-24-2020
Cinwaanka:Qolka 1115, Block A, Hengyuan Plaza, No. 1988, Waqooyiga Saddexaad Ring East Road, Cixi City Zhejiang, Shiinaha